Bayaan Kasoo Baxay XSHM Oo Lagu Xaqiijiyay in uu dhintay Askari Faransiiska Looga Qabtay Dagalkii Buulo Mareer.
Written by gobal on 14 January 2013. Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa sheegtay in askarigii Faransiiska ee Mujaahidiintu ku qabteen isagoo dhaawac ah weerarkii Buula Mareer uu u geeriyooday dhaawiciisii isla markaana saacadaha soo socda laga yaabo sawiradiisa in la faafiyo.
Ilo wareed mas'uul ah ayaa noo xaqiijiyay in qeybaha caafimaadka ee Mujaahidiinta ay isku dayeen daryeelka Askariga balse lagu guul dareystay, waxaana dawladda Faransiiska ay sheegtay askarigaasi in lagu waayay weerarkii fashilmay ee ay ku soo qaadeen degmada Buula Mareer ee Wilaayada Sh/Hoose.
Xiriir aan la sameynay Xafiiska Warfaafinta ee Xarakada Mujaahidinta A-Shabaab ayay sheegeen in ay baahin doonaann sawirada Askariga geeriyooday iyo aqoonsiyadiisii, waxaana ay xaqiijiyeen warkan ku aadan geerida Askariga.
Wasaaradda Gaashaan dhigga Faransiiska ayaa hore u sheegtay in askari looga dilay weerarkii Buulo, mid kalen looga qafaashay halka bayaan ka soo baxay Mujaahidiinta sido kale lagu sheegay in Mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen askari Faransiis ah oo dhaawac ah, kana mid ahaa askartii weerarka fashilmay soo qaaday.
Bayaan kasoo baxay xarakada ayaa lagu sheegay in uu dhintay Askarigii Faransiiska ahaa,sidoo kale bayaanka waxaa lagu xusay in go'aan laga gaaray Sarkaalkii faransiiska horay looga haayay ee DenisAlex. HALKAN AKHRI BAYAANKA Oo English ah SomaliMeMo waa Shabakad Soomaaliyeed oo Islaami ah oo ka madax banaan koox, urur iyo Xisbi, kumana hadasho cid gooni ah afkooda.